ह्यप्पी भालेन्टाइन डे ! « Khoj Raftar
ह्यप्पी भालेन्टाइन डे !
माग बढेपनि उत्पादन घट्दो छ गुलाफको फुलको
२ फागुन,दाङ । आज १४ फेब्रुअरी, भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवस । आज विश्वभर एक आपसमा शुभकामना तथा उपहार साँटासाट गरी प्रणय दिवस मनाइँदैछ । विशेषगरी प्रणय दिवसमा गुलावको फूल उपहार दिने गरिन्छ । युवापुस्तामा बढी लोकप्रिय रहेको प्रणय दिवसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिनका रुपमा लिने गरिन्छ ।
सन्त भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा प्रणय दिवस मनाउन थालिएको हो । भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष १४ फेब्रुअरीमा भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउने गरिएको हो ।
प्रणय दिवसका अवसरमा काठमाडौ लगायत बिभिन्न शहरमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुसमेत आयोजना गरिदैँछ । पश्चिमा संस्कृति भए पनि त्यसको प्रभाव बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय नेपालमा प्रणय दिवस ‘भ्यालेनटाइन डे’ मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । दिवसमा युवायुवतीको आकर्षण र गुलाफको फूलको माग बढ्दो छ ।